သုံးသပ်ချက် Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | Gadget သတင်း
analysis Metal Gear Solid V ကို: အ Phantom နာကျင်မှု
Mundi ဗီဒီယိုဂိမ်းများ | | ဂိမ်းတွေကက
အဆိုပါမျိုးချစ်များ၏သေနတ်များ ၎င်းသည်ဒဏ္legာရီအရှိဆုံးဇာတ်ကောင်များကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည် အစိုင်အခဲ Metal Gear အဲဒီမမေ့နိုင်တဲ့ foray ကတည်းကကျွန်တော်တို့သိခဲ့တာပါ အရိပ် moses အဟောင်း၌ PlayStation။ တိကျစွာနှင့်အမြဲတမ်းတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အတူစိတ်ချပါသူကို၎င်း၏ဖန်တီးသူ၏ထပ်ခါတလဲလဲသတိပေးချက်များရှိနေသော်လည်း metal Gear နောက်ဆုံးဖြစ်မယ့်ခဲ့ပြောင်းကုန်ပြီ, ဒီ Phantom နာကျင်မှု ဟုတ်ကဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာနောက်ဆက်တွဲခါးသီးတဲ့ချီတက်ပွဲနဲ့စစ်မှန်တဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ် Hideo Kojima de Konami.
သို့သော်ဤသည်လွမ်းဆွတ်မှုအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းမဟုတ်ဘဲ၊ အရင်ကထက်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုပိုမိုအားကောင်းစေသည့်ဖြန့်ဝေမှုအတွက်ရွှင်လန်းခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အဆိုပါ Griot ၏ Guns, Metal Gear Solid V ကို: အ Phantom နာကျင်မှု ၎င်းသည်ပလက်ဖောင်းများအားခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိသေးဘဲလက်ရှိနှင့်နောက်ဆုံးမျိုးဆက်နှစ်ခုလုံးအတွက်ရရှိနိုင်သည်။
Phantom နာကျင်မှု ကစားသမား၏ရှေ့မှောက်၌ကျွန်ုပ်တို့ကစားလေ့မရှိသောတင်ဆက်မှုနှင့်အတူရပ်တည်သည် အစိုင်အခဲ Metal Gear ရိုးရာ desktop: ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျယ်ပြန့်သောစူးစမ်းလေ့လာရေးမြင်ကွင်းရှိလိမ့်မည်။ ထိုစီမံကိန်းကိုအဓိကတည်ဆောက်သောမစ်ရှင်နှစ်ခုစလုံးကို - ၅၀ ခန့်ဖြန့်ဝေမည် - ထို့အပြင်ဒုတိယတာဝန်များ။ ဟုတ်ပါတယ်, kojimadas မရှိခြင်း, ၎င်း၏ဖန်တီးသူ၏မှားယွင်းတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, နေဆဲမပြောင်းလဲဖြစ်နေဆဲနည်းဗျူဟာသူလျှို၏အနှစ်သာရ - စစ်မှန်တဲ့လိုပဲရည်ရွယ်ချက်များထက်ကျော်လွန်ရန်လိုအပ်ချက်များပိုမိုထည့်သွင်းထားသည် မွှေ: ရန်သူနေရာများကိုလေ့လာခြင်း၊ သော့ချက်ကျသောနေရာများကိုအမှတ်အသားပြုခြင်း (သို့) နေ့ရောညပါတိုက်ခိုက်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်ကစားပွဲတိုင်းနှင့်အတူပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ထို့အပြင်အချို့သောမစ်ရှင်များကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ယင်းတို့၏သတ်မှတ်ချက်များသည် ပို၍ လိုအပ်လာလိမ့်မည်၊ ကစားသမားအား၎င်းတို့ကိုဖြေရှင်းရန်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များချရန်တွန်းအားပေးလိမ့်မည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘဲတိုးတက်မှုအတွက်အချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရင်းနှီးမြှပ်နှံနိုင်သည် မိခင်အခြေစိုက်စခန်းစစ်ဆင်ရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေစိုက်စခန်း။ မြေပုံသည်အရွယ်အစားကြီးမားသော်လည်းအမှန်တကယ်မြုံနေသောကဏ္sectorsများကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ အမှန်တရားမှာ၎င်းသည်တိုက်မိခြင်းဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်အနတ္တသက်သက်သာသာမဟုတ်ဘဲမပြည့်စုံမှုကိုအာရုံစိုက်စေသည်။
အဆိုပါ Saga မှလေ့နေသောသူများသည် အစိုင်အခဲ Metal Gear ဂိမ်းတစ်ခုချင်းစီသည်ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြသည့်ရှည်လျားသောရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်ကိုသူတို့စိတ်ထဲစွဲမှတ်ထားကြသည်။ ဒီအချိန်, Metal Gear Solid V ကို: အဆိုပါ Phantom နာကျင်မှု ၎င်းတွင်ဤမျှကျယ်ပြန့်သောဗီဒီယိုဖိုင်မရှိပါ။ အမှန်မှာ၊ ရာသီဥတုအခြေအနေအများစုသည်နိဒါန်းအကြားဖြန့်ဝေထားသည်။မြေပြင်သုည- နှင့်ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာယူထားသောအဆုံး။ သတိထားပါ၊ ကက်ဆက်တိပ်ခွေများမပျောက်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်၊ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ဤရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၊ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသည်အခြားအခန်းကြီးများကဲ့သို့သောမော်ကွန်းအဆင့်သို့မရောက်နိုင်ဟုငါပြောရမည် မြွေစားသုံးသူ o အဆိုပါမျိုးချစ်များ၏သေနတ်များ: အရှိဆုံး Phantom နာကျင်မှု ကစားစရာအတွေ့အကြုံတွင်ပိုမိုအားစိုက်ထုတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပုံရသည်။
နည်းပညာအဆင့်မှာ Fox အင်ဂျင် အလင်းရောင်သက်ရောက်မှုများကဲ့သို့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျော်လွန်သည်၊ ဂိမ်းကိုတစ်စက္ကန့်လျှင် ၆၀ နှုန်းဖြင့်လှုံ့ဆော်ပေးပြီးနောက်ဆုံးမျိုးဆက်စနစ်များတွင် 60p resolution ဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်။ စစ်ပြန်များအတွက်ဗားရှင်းသည် Play Station က3y Xbox 360ထင်ရှားသောအမြင်ကွဲပြားခြားနားမှုများအပြင် ၃၀ fps နှုန်းဖြင့်လည်ပတ်သည် - အကြီးမားဆုံးသော polygon load များအချိန်၌ကျဆင်းသွားသည်။ အများဆုံး resolution မှာ 30p ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီလှည့်ဖြားခြင်းကိုမခံပါနဲ့၊ ဒီ consoles တွေရဲ့နှစ်တွေကြားမှာသူတို့ကိုရရှိတဲ့ရလဒ်ကလုပ်နိုင်တယ် Metal Gear Solid V ကို: အဆိုပါ Phantom နာကျင်မှု အတိတ်မျိုးဆက်တစ်ခု၏ဟာ့ဒ်ဝဲများအတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအံ့ဖွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသံကဏ္တွင်၊ အလွန်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောအရာသည်အသံဖြစ်သည် Kiefer Sutherland ကွေး အဆိပ်မြွေမြွေကျနော်တို့၏ဝိသေသသေံဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသောအခါ David hayter.
တိုတိုပြောရရင်, Metal Gear Solid V: The Phantom သည် နာကျင်မှုသည် Saga တွင်အနက်ဆုံးနှင့်အချမ်းသာဆုံးကစားနိုင်သည့်အတွေ့အကြုံကိုပေးသောအခန်းဖြစ်သည်။ အကြွေစေ့၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင်စွမ်းအားမရှိသောမစ်ရှင်များ၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောဇာတ်ကြောင်းနှင့်အခြားအရောင်းအဝယ်၏အမှတ်ရစရာမော်ကွန်းမပါဘဲဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိသည်။ တစ် ဦး ဖြစ်ခြင်း အစိုင်အခဲ Metal Gearအထူးသဖြင့်သင်ဟာအလုပ်ကြိုးစားတဲ့ပရိတ်သတ်တစ် ဦး ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ် Kojima။ ဤ Phantom နာကျင်မှုတစ်နောက်ဆက်တွဲထက်ပို အဆိုပါမျိုးချစ်များ၏သေနတ်များ, အဘယျသို့တစ်ခုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသင့်ပါတယ် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျှောက် ပြီးသားမေ့လျော့သည် PSP de Sony ကသို့သော်လည်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်သင်ကစားနိုင်သည့်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နေအိမ် » ဂိမ်းတွေကက » analysis Metal Gear Solid V ကို: အ Phantom နာကျင်မှု
TP-Link Archer D5 modem router ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Microsoft ၏လက်မှတ်နှင့်အတူထူးခြားသည့်ကိရိယာဖြစ်သော Surface3ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်